Whitepaper: Ahoana ny fomba hampiakaran'ny automatisation ny tahan'ny fiovam-po | Martech Zone
Alahady, Novambra 24, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao nampakarina tao amin'ny anay Tranomboky Whitepaper (Ampandehanin'i PaperShare) dia famoahana natao sy novolavolaina Salesvue avy aminay fahafahana misafidy. Ny whitepaper dia nantsoina hoe, Maninona Ianao no Mila Fomba Fivarotana Prospecting.
Salesvue mampifantoka ny sain'izy ireo amin'ny ambanin'ny fantsom-pivarotana. Ho an'ireo orinasa manana fizotry ny varotra ivelany, eto no anaovana ny fitarihana mba hanarahan'ny mpiasan'ny varotra azy ireo.
Ny olana nasehon'i Salesvue dia ny ankamaroan'ny orinasa mamelatra vola an-taonina ambony latabatra noho ny antony vitsivitsy:
Tsy manana ny ekipa mpivarotra fizotran'ny automatisation ho an'ny varotra izay ahafahan'izy ireo mamorona hetsika ampy amin'ny fanantenana ananany.
Ireo ekipa mpivarotra dia matetika manana fitsipika tsy mitombina manakana azy ireo miantso prospect aloha loatra.
Ireo ekipa mpivarotra dia matetika mijanona miantso ny tombony azo indrindra sy lehibe indrindra amin'ny fifanarahana amin'ny alàlan'ny fampitsaharana ny fifandraisana amin'ireo fanantenana lehibe.
Hitan'ny Salesvue fa ny mpanjifa dia afaka mampitombo ny hetsika amin'ny 50% ary ny fiovam-po farafahakeliny 20% rehefa ampiharina amin'ny ekipa mpivarotra ny fanamoriana automatique. Toy izao ny tarehimarika:
Tags: fizahana-taratramandeha ho azy automatiquevarotraWhitepaper
Ahoana ny fomba hamoronana hevitra momba ny atiny ho an'ny mpanjifa vaovao
27 Nov 2013 amin'ny 2:20 maraina
Misaotra anao nizara taminay ity lahatsoratra ity, mahasoa ahy io. Azafady mba zarao hatrany ireto karazana fampahalalana ireto, ary mazava ho azy, misaotra tamin'ny ezaka nataonao!